"Koa amin’izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora." Matio 25:13
"Fa raha misy kosa tsy manana ny Fanahin’i Kristy dia tsy Azy izy." Romana 8:9
"(Hoy Jesosy: ) Eny, avy faingana Aho. Amena. Avia, Jesosy Tompo!" Apokalypsy 22:20
Fanoharana vitsivitsy; Matio 25:1-13
Famintinana: Andro fampakarambady tamin’izay. Alina mangatsiatsiaka no ankalazana ny fampakarambady araka ny fomban-tany any an-toerana. Ny mpampakatra dia tokony handroso mankany amin’ny efitrano fanasana, otronina tovovavy folo. Saingy raha naharitra ela ny mpampakatra, dia samy rendremana ireto tovovavy… Nony mamatonalina dia nisy antso hoe: “Indry ny mpampakatra!”. Dia samy nanomana ny fanalany izy rehetra, saingy efa ho faty ny an’ny dimy tamin’izy ireo. Fa raha mbola lasa nividy solika ireo, dia tonga ny mpampakatra, ary niara-niditra taminy tao amin’ny fampakarambady ireo izay nanana solika, dia ireo “hendry”. Ny sasany kosa, rehefa niverina, dia nahita ny varavarana efa nirindrina.
Heviny: Ny mpampakatra, dia Kristy, Izay hiverina haka ireo mpino hiaraka aminy ho any an-danitra. Ireo tovovavy folo, dia kisarisarin’ny olona mitondra ny anarana hoe kristiana. Ny torimasony, dia ny fanadinoana io tsy maintsy hiverenan’ny Tompo io, nandritra ireo taonjato efa nisian’ny fivavahana kristiana. Ny antso tamin’ny alina, dia ny fanambarana, vao tsy dia ela tao amin’ny tantaran’ny Fiangonana, hoe: “Avy ny Tompo!”. Ny fanala, dia ny fijoroan’ny kristiana ho vavolombelona; ary ny solika, dia ny aina avy amin’Andriamanitra, entin’ny Fanahy Masina.
Fampiharana: Tokony ho vonona amin’ny fiverenan’ny Tompo, sao tara loatra. Tsy ampy ny hoe miara-miaina amin’ny kristiana, fa ilaina ny manana ny aina avy amin’Andriamanitra, amin’ny alalan’ny fibebahana sy ny finoana ny Tompo Jesosy. Rehefa ho avy haka ny olony Izy, dia tsy hisy fotoana hiomanana intsony! Harindrina avy hatrany ny varavarana.
Anio no fotoana tokony hinoana, tsy tompon’ny ampitso isika. Aoka àry ho tahaka ireo tovovavy “hendry”!